Kidnapping: navotsotr’ireo mpaka an-keriny i Sofiane Omrani | NewsMada
Dimy andro taorian’ny nakan’ireo jiolahy nirongo fiadiana an-keriny azy, teny Soavina Atsimondrano, ny asabotsy 8 desambra teo, votsotra ny alin’ny alarobia teo ilay teratany tonizianina, Sofiane Omrani.
Iza ireo mpaka an-keriny ? Taiza sy ahoana ny fomba nihazonana azy ? Votsotra tamin’ny fomba ahoana ? Nisy ve fanomezana vola ho takalon’ny famotsorana azy ?… Tsy nisy fantatra ny antsipirihany, mikasika ny fakana an-keriny an’ity teretany tonizianina, Sofiane Omrani ity fa hoe votsotra fotsiny izy dia izay. Na ny mpitandro filaminana aza, araka ny fantatra, efa ny am-pitson’io andro namotsoran’ireo jiolahy azy fa nampahafantarin’ny fianakaviany. Tahaka izany koa no nitranga mikasika ilay teratany karana, Malik Karmaly, niara-nalaina an-keriny taminy.
Ity raharaha fakana an-keriny ity izay nilazan’ireo avy amin’ny CFOIM fa efa lasa raharaha iraisam-pirenena mihitsy, indrindra tamin’ny fakana an-keriny ity Tonizianina ity. “Efa ao anatin’ny lisitry ny firenena atahorana mafy ho an’ny vahiny i Madagasikara”, hoy izy ireo. Manao antso avo hatrany izy ireo amin’ny fitondrana mba hijery akaiky sy haka fepetra hentitra momba ity fakana an-keriny ity.
Noresahina tao amin’ny filankevitry ny minisitra, ny 3 desambra teo, ny momba ny fakana an-keriny eto amintsika. Nilaza ny filoham-panjakana ny hanamafisana ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana amin’ny faritra mafana eto amintsika. Ny fanetsehana ny mpitandro filaminana, sns. Tsy nisy zavatra nivaingana momba ny any ady amin’ny fakana an-keriny. Marihina fa efa nahatratra 13 ny isan’ny fakana an-keriny karana teto an-dRenivohitra, tamin’ity taona ity. Ahina ny mbola hitohizany.
Anisan’ny nahatonga ny Komandin’ny zandarimaria, faritra Atsinanana nanao teny masika ho andry zareo karana ihany koa anefa ny tsy fisian’ny fiaraha-miasa avy amin’ny fianakavian’ireo voakasin’izany. Tamin’izany no nanamarihan’izy ireo fa ny famaliana ny fitakiana volabe dia toy ny famahanana ireo jiolahy mpaka an-keriny, ka mahatonga ity raharaha kidnapping ity hitohy tsy misy farany.